Kal-fadhiga labaad ee baarlamaanka KGS oo maanta ka furmaya Baydhabo iyo kulamo xalay ka dhacay magaaladaas – Hornafrik Media Network
Kal-fadhiga labaad ee baarlamaanka KGS oo maanta ka furmaya Baydhabo iyo kulamo xalay ka dhacay magaaladaas
By Liibaan Nuur	 On Oct 8, 2019
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay saakay waxaa lagu wadaa in uu ka furmo kalafadhiga 5-aad ee baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Kulamo looga arinsanayay furitaanka kalafadhiga baarlamaanka ayaa xalay ka dhacay madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo.
Kulamadaas ayaa waxaa qeyb ka ahaa guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka, guddoomiyaha baarlamaanka wadanka Jabuuti, madaxweyne Cabdicasiis Lafta-gareen, guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo mas’uuliyiin kale.
Sidoo kale intii ay socdeen kulamadii xalay ka dhacay madaxtooyada maamulkaas ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa la sheegay in looga hadlay sidii is kaashi guud loogu samayn lahaa baarlamaanada dowlad goboleedyada dalka, baarlamaanka federaalka iyo baarlamaanka dalka Jabuuti oo guddoomiyihiisa uu shalay soo gaaray Soomaaliya, isagoo ka soo degay garoonka Aadan-Cadde ee magaalada Muqdisho, isla markaan isaga iyo Maxamed Mursal ay isla shalayba gaareen magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaara u ah maamulka Koonfur Galbeed.
Ammaanka magaalada Baydhabo ayaa waxii shalay galinkii hore ka dambeeyay aad loo adkeeyey,waxaana saakay lagu balansanyahay in guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh iyo dhigiisa baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud ay ka qeyb galaan furitaanka kalafadhiga 5-aad ee baarlamaanka maamulkaas.
Sidoo kale labada guddoomiye baarlamaan ee Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa la sheegay in isla maanta ay dib ugu soo laabanayaan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka.